တရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက စစ်မှုထမ်းဟောင်း ရဲဘော်ရဲဘက်များအား နွေဦးပွဲတော်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က မြို့တော် ပေကျင်း၌ ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားအရေး ဗဟိုညီလာခံသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့စဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် နှင့် အခြားသော ခေါင်းဆောင်များသည် နွေဦးပွဲတော် သို့မဟုတ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအား ကြိုဆိုသောအားဖြင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်း ရဲဘော်ရဲဘက်များထံ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားသော နည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ရှီ နှင့် အခြားခေါင်းဆောင်များသည် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နွေဦးပွဲတော်ဖြစ်ပါစေကြောင်း၊ ကျန်းမာချမ်းသာ၍ အသက်ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Jan. 29 (Xinhua) — President Xi Jinping and other Chinese leaders have extended festive greetings over the phone or via other means to veteran comrades ahead of the Spring Festival, or the Chinese Lunar New Year.
Xi, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, and the other leaders wished the veteransahappy Spring Festival, good health and long lives. Enditem
Photo-Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, attends and addresses the central conference on ethnic affairs in Beijing, capital of China. (Xinhua/Pang Xinglei)
တရုတ်-ဥရောပ ကုန်တင်ရထား ခရီးစဉ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ကျော်ပြေးဆွဲပြီးဖြစ်